8 caqabad oo laga dhexli doono Loolanka U dhaxeeya Al-Shabab iyo ISIS (Daacish) | Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho ( Mareeg News ) Magaalada Muqdisho ee caasimada Somalia ayaa waxaa kusii kordhaaya dilalka iyo Qaraxyada ay sida wada jirka ah u geysanayaan maleeshiyaadka Daacishta Somalia iyo Al-Shabaab.
Dilalka ka dhaca Muqdisho ayaa u kala qeybsama kuwo xiliyada la fulinaayo laga qaado Sawirro, halka dilalka kale ay yihiin kuwo caadi ah, oo ay fuliso al-Shabaab.
Al-Shabaab iyo Daacish oo kusii xoogeysaneysa Somalia ayaa u muuqanaaya kuwo ku tartamaaya daadinta dhiiga shacabka, iyadoo uu mashruuca yahay mid lagu tartamaayo shacabka.
Loolanka labada maleeshiyo Kooxeed oo kusii xoogeysanaaya Somalia, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada Puntland ayaa waxaa laga dhexli karaa qodobada kala ah:
1-Iyadoo Koox waliba ay dooneyso inay ka dheereyso Kooxda kale ayey sameyn doonaan dhagaro dhiig badan uu ku daato.
2-Qaraxyada oo kordha, iyadoo ay suuragal tahay in Koox waliba ay sameyso kuwo gaara oo lagu aqoonsan doono, Tusaale sida dilalka iminka nagu cusub oo ay Daacish-ta Somalia ka geysato Muqdisho, kuwaa oo laga qaado Sawirro.
3-In labada Maleeshiyo Kooxeed ay ku tartamaan qabsashada deegaano hor leh oo taariikhi ah iyo labaduba ay u kala hormaraan degista keymo hor leh.
4-Inay dhacaan weeraro iyo dagaalo goosgoos ah oo gudaha iyo Goboladuba ku dhexmara al-Shabaab iyo Daacishta Somalia, iyadoo ujeedku uu noqon doono in Koox waliba ay ku awood sareyso dalka.
5-Inay dhacaan dilal ay isku ugaarsan doonaan labada Maleeshiyo kooxeed, gaar ahaan labada Amniyaad, waxa ayna ku loolamayaan dhiiga shacabka ee sida sahlan ku daadanaaya.
6-In labada dhinac uu dhexmaro dagaalo taariikhi ah si Koox waliba ay uga awood sheegato Kooxda kale, waxaana suuragal ah inay kala qeybsadaan dalka oo Koox waliba looga danbeeyo jiho gaara.
7-In Qaraxyada ka dhaca Muqdisho iyo Gobolada qaar loo bedelo gaadiidka waaweyn sida kuwa xamuulka IWM, maadaama maleeshiyaadka Daacish looga bartay inay geystaan Qaraxyo ka duwan kuwa ay fuliyaan xagjiriinta kale.
8-In lagu diimo Qaraxyada loo isticmaalo gaadiidka yaryar ee raaxada sababo la xiriir is muujinta Koox waliba.
Daacishta Somalia ayaa u muuqaneysa inay laba jibaarayaan falalka amni darro ee kadhaca magaalada Muqdisho, sida dilalka iyo Qaraxyada fudud.
Al-Shabaab ayaa iyana geysata sida caadaduba aheyd dilal iyo Qaraxyo lala eegto dadka maatida ah si ay u muujiyaan magacooda, wallow aysan awood ku dhameen ciidamada Qaranka.
Si kastaba ha ahaatee, loolanka labada Maleeshiyo Kooxeed ayaa cuuryaamin kara awoodaha dowlada Somalia maadaama dowladu ay tahay mid yareysaneysa halista labada Koox ay ku yihiin dalka.